Mpempe akwụkwọ mgbidi, ngwa nbipute ala, ngwa nbipute inkjet ejiri aka - huakehengrun
Ekwentị:+86 189 7131 9622
Otu ngafe inkjet ngwa nbipute
ngwa nbipute mgbidi
desktọọpụ inkjet ngwa nbipute
cij inkjet ngwa nbipute
Ihe nbipute mgbidi
Ihe nbipute ala
Igwe ihe osise mgbidi HKHR UV Wall
Mpempe akwụkwọ inkjet mgbidi dị elu na-agba ọsọ
CMYK inkjet ngwa nbipute maka mgbidi mgbidi ebipụta mac ...
Ihe nbibi mgbidi dị n'èzí Robot Wall Printer Pri...
3D UV Mural inkjet Printing Machine Direct Iji w...
Akpaaka Mural 3D Igwe nbipute mgbidi kwụ ọtọ...
Nnukwu oso CMYK Plastic okpu Online Industrial C...
Igwe na-ebi akwụkwọ mgbidi kwụ ọtọ 3D Wall Pen
Igwe nkpuchi mkpuchi CMYK dị elu nke agba UV inkjet
Igwe nbipute inkjet thermal nke ejiri aka jide
Obere obere koodu ụbọchị inkjet ngwa nbipute ejiri aka
Mpempe akwụkwọ TIJ nwere obere inkjet ngwa Mac...
75mm Thermal Handheld inkjet ngwa nbipute ụbọchị koodu ...
Igwe na-ebi akwụkwọ 3D UV dị elu
Igwe nbipụta ink Jet UV dị elu…
Wuhan HAE Technology Co., Ltd kemgbe afọ 2008, ndị bụ ndị isi ụwa na Inkjet Printing, mbipụta mgbidi na mbipụta ala.Nke a bụ mgbidi mbụ nke ụwa na ngwa nbipute mgbidi kachasị ọhụrụ nke enwere ike iji maka ibipụta ihe ọ bụla n'elu elu ọ bụla dị elu nke na anya gị agaghị ekwenye.
huakehengrun Wheel ụdị mgbidi ngwa nbipute bụ ìhè & foldable maka tranporatioin, mfe ọrụ, kwụsiri ike na 2880dpi elu mkpebi obibi.
Enwere igwe nbipute ink nke mmiri CMYK na igwe na-ebi akwụkwọ ink CMYK + W UV maka nhọrọ iji zute arịrịọ ngwa obibi ndị ahịa dị iche iche.
bụrụ enyi anyị
Ink UV kacha dị gịrịgịrị n'ụwa akpaka kwụ ọtọ ...
Anyị nwere ahụmịhe imewe bara ụba, nhazi akụrụngwa dị mma na ikike nrụpụta.
Iji usoro njikwa modul nwere ọgụgụ isi dị ugbu a nke ụlọ dị ugbu a, yana ngwa igwe dị elu iji mepụta akụkụ, na-eme ka nnyefe akụrụngwa dịkwuo mma, mmegharị kwụsiri ike, yana ogologo ndụ ọrụ.
Ugbu a, ụlọ akwụkwọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ebe a na-ere ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ebe a na-asa ahụ́, mgbatị ahụ, na mgbidi dị n'èzí nke ụlọ ụfọdụ chọrọ ihe osise mgbidi iji chọọ mma.
Na-eche echiche banyere ihe ndị ahịa na-eche na ihe ha chọrọ, ihe ọ bụla site n'echiche nke ndị ahịa, site na nyocha ruo igbu mmadụ, izute àgwà nhazi nke onye ọ bụla, meziwanye àgwà ngwaahịa, ma belata ụgwọ ọrụ mmepụta ihe.
Ndị otu R&D gụrụ akwụkwọ nke ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka nrụpụta ọhụrụ na-aga n'ihu na arụmọrụ kwụsiri ike nke ngwaahịa ụlọ ọrụ, na-eme ka ngwaahịa ụlọ ọrụ pụta ìhè na asọmpi ahịa.
Ụlọ ọrụ ahụ na-ekwusi ike ịbụ ndị ahịa-centric na ahịa, ka ụlọ ọrụ ahụ nwee ike ịnọgide na-enwe ọganihu dị irè ogologo oge.
Nhazi ụkpụrụ nke ndị na-ebi akwụkwọ inkjet
1. Na-aga n'ihu Inkjet Printer N'okpuru nrụgide nke mgbapụta mgbapụta ink, ink na-agafe site na pipeline ink site na tank ink, na-edozi nrụgide, viscosity, wee banye na egbe ịgba.Dị ka ...
Nlekọta na mmezi isi inkjet ebipụta
Dị ka akụkụ bụ isi nke ngwa nbipute inkjet, isi mbipụta dị ezigbo mkpa.Isi ebipụta dị oke ọnụ ahịa, ọ ga-abụkwa ihe na-egbu mgbu iji ogologo oge.Ka t...
Adreesị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Beijing: 101A, Ụlọ 11, ogige 3, okporo ụzọ Gaolizhang, Haidian District, Beijing
Ọfịs ọrịre nke mba ofesi na Middle China Sales Office:
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Wuhan HAE Technology Co., Ltd.
Ala 6, ụlọ 2A, Optics Valley Science and Technology Port, Guanshan Road, Optics Valley, Wuhan, China
ekwentị mkpanaaka:+86 27 8750 8600
Mpempe akwụkwọ inkjet ejiri aka
Ngwa inkjet dị n'ịntanetị